နေပူပူ ရာသီဥတုပူပူမှာ စားချင်နေတဲ့ ချဉ်ငံစပ်အသုပ်လေး သုပ်စားဖြစ်လို့ လွယ်ကူမြန်ဆန် ဟင်းတပွဲ ဖြစ်စေမဲ့ နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
တလုံးလုံး အပြည့်လိုက်ပေါက်ပြီးတာနဲ့ ခပ်ပါးပါးလေးတွေ လှီးချပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ဇလုံ သို့မဟုတ် ငရုတ်ဆုံကြီးကြီးထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်း အားလုံးကို ထည့်ပြီး ထောင်းပေးပါ
Posted by Tuumar at 6:59 am No comments:
ဒီနေ့တော့ ခြံထဲက ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ စိုက်ထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေခူးပြီး ချဉ်ရည်ဟင်းလေး တမယ်ချက်ပါမယ် ငယ်ငယ်က မိသားစုတွေ ခြံထဲသွားတိုင်း ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဟင်းလေးဖြစ်ပြီး အသားမပါပေမဲ့ စားမိန်ဟင်းလေးဖြစ်လို့ ချက်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
မုန်​ညှင်းစိမ်း - ၅ပင်ခန့်
ပန်းဂေါ်ဖီ - အနေတော် ၃ခက်
ကြက်​သွန်​နီ - အနေတော် ၁လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ - ခပ်ကြီးကြီး တမွှာ
ချင်း​ - လက်တဆစ်ခန့်
မန်​ကျည်းသီးမှည့်​ - အနည်းငယ်
အနည်းငယ်ရင့်သော အရိုးတံရဲ့ အ​ပေါ်​ကြော​တွေကို ခွာပလိုက်ပြီး နုတဲ့အပိုင်း​လေး​တွေကို ရွေးယူပြီး လှီးပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ရေ​ဆေးပြီး ရေစစ်​ထားပေးပါ
ပန်းဂေါ်ဖီကို ရေဆေးပြီး လှီးထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူကို ညက်နေအောင် ထောင်းထားပါ
မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို ရေတထပ်ဆေးပြီး ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေစိမ်ထားပါ
ငရုပ်သီးစိမ်းကို ရေဆေးပြီး အတောင့်လိုက်ထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ဇောက်နက်သော အိုးထဲမှာ ပန်းဂေါ်ဖီ မုန်​ညှင်းရွက်​​နှင့်အတူ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်​သွန်​နီ ထောင်းထားသော ကြက်​သွန်​ဖြူ ဆား အရသာမှုန့်တို့ကို ထည့်နယ်ပေးပါ
ရေဆူလာတာနဲ့ ရေစိမ်ထားသော မန်ကျည်းရည်ကို ထည့်ပေးပါ
ရေကို အနေတော်ထည့်ပေးကာ အရသာမြည်းပြီး လိုသလို ပြင်ပေးပြီး လှီးထားသော ရုံးပတေသီးများကို ထည့်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 7:19 am No comments:
ချဉ်ငံစပ် ပဲပုတ်ထောင်း မွှေးမွှေးလေး
ထမင်းများ ဆာလာတဲ့အခါ အသားဟင်းမပါဘဲ အခုလို ပဲပုတ်ထောင်းလေးနဲ့လဲ မိန်တတ်တာပါဘဲ ဒါကြောင့်မို့ လွယ်ကူမြန်ဆန် ပဲပုတ်ထောင်းနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အချိုမှုန့် - အနည်းငယ်
သရက်သီးအစိမ်း - အနေတော် တလုံး
ပဲပုတ်ကို ကြွတ်သွားတယ်ဆိုရုံလေး ကင်ပေးပါ
ငရုတ်သီးစိမ်းကို အညှာဖြုတ်ပြီး ရေဆေးကာ နွမ်းသွားအောင် လှော်ပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ပဲပုတ်ကို အရင်ဆုံး မညက်တညက် ထောင်းပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း ပေါက်ထားသော သရက်သီးစိမ်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့်ထောင်းပေးပါ
အားလုံးညက်ပြီဆိုတာနှင့် ဆား အချိုမှုန့်နှင့် နံနံပင်တို့ထည့်မွှေပေးကာ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ပေးကာ ထမင်းပူပူလေးနှင့် စားသုံးရန် ချဉ်ငံစပ် ပဲပုတ်ထောင်း မွှေးမွှေးလေးကို ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 7:45 am No comments:
Labels: အသီးအရွက်ထောင်း စားဖွယ်ရာများ
တခါတလေတော့လဲ စားနေကျပုံစံတွေထဲက ခွဲထွက်ပြီး ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးတွေ စားချင်လာပြန်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီတခါမှာတော့ အိမ်ချက်အလွယ် တုန်ယမ်းဟင်းချို ချက်ပြီးသောက်ဖြစ်လို့ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ရိုးပြုပ်ရည် - တလီတာခွဲ
တရုတ်မုန့်ညှင်းဖြူ - ၄ရွက်ခန့်
ဘရိုကိုလီ - ၄ခက်ခန့်
မှို - ၅ ခု
အုန်းနိူ့ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန်အသေး တလုံးစာ
တုမ်ယမ်းပာင်းအနှစ် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ကြက်သွန်နီ - အနေတော် ၁ လုံး
ကြက်ရိုးကို ရေများများထည့်ပြီး တလီတာ ခွဲလောက်ကျန်အောင် ပြုပ်ပေးပြီး ပြုပ်ရည်ကို ပြင်ထားပါ
ဇောက်နက်သော အိုးတလုံးထဲမှာ ကြက်သားပြုတ်ရည်ထည့်ပါ
ထိုအိုးထဲကို စပါးလင် ပဒဲကော တုမ်ယမ်းပာင်းအနှစ် ငရုတ်သီးစိမ်း အနီတောင့် တောရှောက်ခါးရွက် ကြက်သွန်နီတို့ကို ထည့်ကာ ဆူပွက်အောင် တည်ပေးပါ
ဟင်းရည်အိုး ပွက်ပွက်ဆူလာတာနဲ့. လှီးထားသော အသီးအရွက်များ ဂဏန်းသားနှင့် ပုစွန် တို့ကို ထည့်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 8:27 am No comments:
သမီးငယ်အတွက် ကြော်ပေးရတဲ့ သတ်သတ်လွတ် ကညွှတ်ကြော် ဟင်းတမယ်ပါ ကြော်တယ်ဆိုတာထက် ဆီနည်းနည်းနဲ့ အိုးပူတိုက်ပြီးမှ ရေအနည်းငယ်နဲ့အရသာသွင်းထားတာပါ လွယ်ကူမြန်ဆန် သတ်သတ်လွတ် ဟင်းတမယ်အတွက် အိုးပူတိုက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကညွှတ် - ၁၀ပင်
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်ု သုံးပုံတပုံ
နှစ်မိနစ်လောက် အိုးပူတိုက်ကာ ကြော်ပြီးတာနဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်မွှေကာ ကညွှတ်ကြော်ကို ပူနေတုန်းလေး နှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
အသီးအရွက်လေး တမယ်ပါမှ ထမင်းစားလို့ မိန်တတ်လေတော့ ဒီနေ့တော့ လွယ်ကူမြန်ဆန် ကညွှတ်ကြော် ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပုဇွန်ခြောက် - အကောင်၂၀ခန့်
Posted by Tuumar at 8:03 pm No comments:
မုံလာဥနီ - ခပ်ကြီးကြီး တလုံး
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ခွက် တ၀က်
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ခွက် တ၀က်
မီးအရမ်းမများစေရန် သတိပြုပြီးကြော်ပေးပါ တစ်ဖက်ရွှေဝါရောင်သန်းလာပါက တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက မုန်လာဥနီကြော်မွှေးမွှေး ကြွတ်ကြွတ်လေး ရပါပြီ။
အိမ်မှာ မကြာမကြာဆိုသလို ချက်စားဖြစ်တဲ့ ကြက်ဆီထမင်း အိမ်ချက်လေး ချက်ဖြစ်ပါတယ် အရင်တုန်းကလဲ ကြက်ဆီထမင်း ချက်နည်းလေးတွေ တင်ပါတယ် ပို့စ်အဟောင်းတွေက နောက်မှာ ကျန်ခဲ့လေတော့ ချက်နည်းလေးတွေ ပြန်ရှာရခက်သလို နေ့စဉ် မြင်နေရရင်တော့ စိတ်ထဲမှာ စားချင်စိတ်လေး ပေါ်လာရင် ချက်နိူင်အောင် ချက်နည်းလေး ပြန်လာည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ပေါင် - တကီလိုခန့်
ဘာစမာတီဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၄ဗူး
ကြက်အဆီဖတ် - ၅ခုခန့် သို့မဟုတ် ကြက်အရည်ခွံ ၅ခုခန့်
စပါးလင် - ၈လက်မခန့်
ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး အမွှာ၂၀ခန့် (အချဉ်စပ်ရန် ကြက်ပြုပ်ရန်နှင့် ဆန်ဆီသတ်ရန် ခွဲသုံးပါ)
ကြက်သွန်မိတ် - ၃ပင်
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၅တောင့်
ပျားရည် - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က် ပျားရည်မရှိက သကြား ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အကျဲ - ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း
အချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ (ဟင်းချိုနှင့် ကြက်ပြုပ်တွင်သုံးရန်)
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ ( ကြက်ပြုပ်ထဲ ၂ဇွန်းထည့်ရန်နှင် ပိုတာကို ဟင်းချိုရည်ထဲ ထည့်ရန်)
ကြက်ပြုပ်ရည် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၈ဗူး (ထမင်းချက်ရန်)
ကြက်သွန်မိတ်ကို တလက်မ အရှည်ခန့်လှီးထားပါ
ဇောက်နက်သော အိုးတလုံးထဲမှာ ကြက်သား ချင်း ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းခွဲ အချိုမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း ကြက်သွန်ဖြူ ၄မွှာ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်မိတ်တို့နှင့် ရေမြုပ်အောင်ထည့်ကာ ဟင်းရည်များ ဝေမကျစေရန် အဖုံးမဖုံးဘဲ မီးအားကောင်းကောင်းနဲ့ ပြုပ်ပေးပါ
ဟင်းရည်များ ဆူလာပြီဆိုတာနဲ့ မီးကိုအနေတော်သို့ လျှော့ကာ အဖုံးဖုံးပြီး ပြုပ်ပေးပါ
တဖက်ကို မိနစ်၂၀ခန့်ပြုပ်ပေးပြီး နောက်တဖက်ကို အရည်ခွံများ လန်မထွက်စေရန် အသာလှန်ပေးပြီး မိနစ်၂၀ခန့် ဆက်ပြုပ်ပေးပါ
မိနစ်၄၀ခန့် ပြုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ အအေးခံပြီး မိမိနှစ်သက်သည့်ပုံစံ ခုတ်ပေးထားပါ
ချင်း လက်တဆစ်လောက်ကို အခွံခွာပြီး ထောင်းထားပါ
ပူလာတာနဲ့ ဆီ ကြက်ဆီဖတ် ကြက်သွန်ဖြူ ချင်းတို့ကို ထည့်ပြီးကြော်ပေးပါ
သုံးသော ဆန်အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး ရေကိုထည့်ပါ
ဆန်ပျော့ကို ချက်ပါက ပုံမှန်အတိုင်း ရေကိုထည့်ပြီး ဆန်မာကိုသုံးပါက ရေပိုထည့်ပါ
ဆန်အမာ သုံးထားသည့်အတွက် ရေကိုပိုသုံးထားပါတယ်
ရေနွေး အအေးခံပြီးသား ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်းကို ပြင်ပေးထားပါ
ကြက်ဆီထမင်း စားရန် မိသားစု နည်းတဲ့အတွက် ကြက်သားနှင့်ဆန်ကို သင့်ရုံလေးဘဲ ချက်ထားပါတယ် မိသားစု ၅ယောက်စာအတွက် အထက်ပါ နူံးထားအတိုင်း ချက်ပေးပါ။
ဒီနေ့တော့ ရာသီဥတု ပူပူမှာ ငရုတ်ကောင်း ပူပူလေးနဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ကျဲ စားချင်စိတ်က ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် ပူပူလူလူ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ စားရလေအောင် ငရုတ်ကောင်း နိူင်နိူင်နဲ့ ဒီနေ့ချက်ဖြစ်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ကျဲ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
မုန့်ဖတ် - 1000g
ငါးခူ သို့မဟုတ် ဘာဆာငါး - 200g
ဆား - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းမောက်မောက်
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း (တ၀က်ငါးပြုပ် တ၀က်ငါးဆီသတ် )
ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး အမွှာ ၂၀ခန့် (တ၀က်ဆီချက် တ၀က်ငါးဆီသတ်ရန် )
ငါးခူကို ဘေးဆူးတောင်များ ခုတ်ပြီး ဗိုက်ထဲမှ ကလီစာများ ထုတ်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ဆား ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းထည့်ပြီး ပွတ်တိုက်ဆေးပေးပါ
ငါးအရည်ခွံ တော်တော်လေး ဖြူလာတာနဲ့ ရေစင်အောင်ဆေးပေးပါ
ဇောက်နက်သော အိုးတလုံးထဲမှာ ရေဆေးထားသော ငါးခူကိုဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း ငံကြာရည် ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း နနွင်းမှုန့် စပါးလင်၂ချောင်းနှင့် ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ပြုပ်ပေးပါ
ငါးအသား နူလာတာနဲ့ အရိုးအသား သတ်သတ်စီ နွှင်ပေးထားပါ
အသားနွှင်ထားသော အရိုးနှင့် ထည့်ပြုပ်ထားသော စပါးလင်ချောင်းကို ကြေအောင်ထောင်းပြီး ရေအနည်းငယ်နှင့် ငင်ထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံခွာပြီး အလုံးလိုက်ရေဆေးကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထောင်းထားပါ
ဒယ်အိုးထဲ ဆီထည့်ပြီး နနွင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံထည့်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဆီသတ်နံ့ မွှေးလာတာနဲ့ အရိုးထွင်ထားသော ငါးနှင့် အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းမောက်မောက်ကို ထည့်မွှေပေးပါ
ဆီသတ်နံ့ သင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ မီးပိတ်ပေးပါ
ဇောက်နက်သော အိုးတလုံးထဲ ငါးပြုပ်ရည် ငါးအရိုးကိုထောင်းပြီး အရည်ငင်ထားသော ငါးရိုးအရည် ငါးဆီသတ်များနှင့် ရေ ၃လီတာခန့်ထည့်ပြီး ပြုပ်ထားသော ကြက်ဥကိုအလုံးလိုက် ထည့်ပေးပြီး တည်ပေးပါ
ကြက်ဥ ၇လုံးခန့်ကို ပြုပ်ပြီး အခွံခွာထားပါ
ဆန်လှော်မှုန့်ထည့်ပြီး ဟင်းရည်အိုး ပွက်ပွက်ဆူလာကာ ကြက်သွန်များ နူးလာပြီဆိုတာနဲ့ ခေါက်ထားသော ကြက်ဥကို ထည့်မွှေကာ မွှေပေးပြီးတာနဲ့ ငရုတ်ကောင်း မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ကျဲ ပူပူလေး ရပါပြီ။
ခရမ်းချဉ်သီးကို ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးထားပါ
ပူစီနံနှင့် ပဲပင်ပေါက်ကို ရေဆေးပြီး ပြင်ထားပါ
လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ပြင်စဉ်ပြီးပါက နှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်မည့် ငရုတ်ကောင်း မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ကျဲ မွှေးမွှေးလေး ရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 5:41 am No comments:
သရက်သီး ဆားရည်စိမ်ထောင်း စပ်စပ်လေး
ဒီတခါတော့ ထမင်းစား မိန်စေမဲ့ သရက်သီးဆားရည်စိမ်ကို ပုဇွန်ထုတ်နဲ့ ခပ်စပ်စပ်လေး ထောင်းဖြစ်လို့ ထောင်းနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပန်းကန်တခုထဲ ပြောင်းထည့်ပေးပြီး ချဉ်ငံစပ်အရသာပါဝင်တဲ့ သရက်သီးဆားရည်စိမ်ထောင်းလေးကို ထမင်းပူပူလေးနှင့် စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
ဒီနေ့တော့ ထမင်းမိန်စေမဲ့ အိန္ဒိယစတိုင်လ် ကြက်သားဟင်း မွှေးမွှေးလေးချက်ဖြစ်လို့ ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ပေါင်သား - 500g
နံနံစေ့ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
စမုံစပါး - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံ
ဖာလာ - တခု
သစ်ဂျပိုးခေါက် - အနေတော် တခု
လေးညှင်း သစ်ဂျပိုးခေါက် ဖာလာ စမုံစပါး နံနံစေ့နှင့် ဖာလာတို့ကို ပြင်ထားပေးပါ
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် နနွင်းမှုန့်. ဆီ မဆလာတို့ကို ပြင်ထားပါ
ပြီးတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ နီ နင့် ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်တို့ကို မွှေးလာာတဲ့ထိ ဆီသတ်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 12:34 pm No comments:
ကျက်အောင်ပြုပ်ပြီး အခွံခွာထားသော ကြက်ဥ - ၆လုံး
နူးနေအောင် ပြုပ်ထားသော ကုလားပဲခြမ်း - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် အသေး တလုံးစာ
အခွံခွာပြီး ရှစ်စိတ်စိတ်ကာ ရေဆေးထားသောအာလူး - အနေတော် ၃လုံး
ခပ်ထူထူလှီးကာ ရေမြုပ်အောင် စိမ်ထားသော ခရမ်းသီး - ခပ်ကြီးကြီး တလုံး
ရေဆေးပြီး အနေတော် လှီးထားသော ရုံးပတေသီး - ၇တောင့်
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တဥ
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး၃မွှာ
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသော ချင်း - လက်တဆစ်
ရေစိမ်ထားသော မကျီးသီးမှည့် - ကွမ်းသီးဆံလုံးလောက်
ပျဉ်းတော်သိမ်းရွက် - အနေတော် ၃ခက်
နံနံစေ့ - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံ
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့်. - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
ဆီပူလာတာနဲ့ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ နံနံစေ့ ချင်းနှင့် ငရတ်သီးမှုန့်တို့ကို ထည့်ကာမွှေးလာတဲ့အထိ ဆီသတ်ပေးပါ
ငရုတ်သီးနံ့မွှေးလာတာနဲ့ အာလူးနှင့် ခရမ်းသီးကိုထဲ့ပြီး ငါးငံပြာရည် တခါထဲထဲ့ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ
ငံပြာရည်နံ့သင်းလာပြီး အာလူးအရောင် ပြောင်းလာတာနဲ့ပြုပ်ထားသောပဲ အခွံခွာထားသော ကြက်ဥနှင့် ရေမြုပ်အောင်ထဲ့ပြီး အရသာမှုန့်နှင့် ဆားထဲ့ကာ ခရမ်းသီးနှင့် အာလူးနူးအောင်တည်ပေးပါ
ခရမ်းသီးနှင့် အာလူးနူးလာတာနဲ့ မကျည်းသီးမှည့် အရည်ထဲ့ကာ ရေဆူအောင် ဆက်တည်ပြီး ရုံးပတေသီးထည့်ကာ အရသာမြည်း၍ လိုသလို ပြင်ပေးပြီး ပျဉ်းတော်သိမ်းရွက်နှင့် မဆလာအုပ်ကာ မီးပိတ်ပေးပြီး စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:31 pm No comments:
အခုရက်ထဲ ပုဇွန်သားလေးတွေ ၂ကီလိုဝယ်ထားပြီး ချိုချဉ်ငံစပ် လှည့်ပါတ်ပြီး ချက်နေမိပါတယ် ဒီနေ့တော့ ကလေးလူကြီး စားနိူင်မဲ့ ပုဇွန်အချိုကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ငါးငံပြာရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
ကြက်သွန်နီ - အလုံးကြီးကြီး တလုံး
Posted by Tuumar at 3:44 pm No comments:
ပုဇွန် ငရုတ်သီးစိမ်း အစပ်ဟင်း
ဒီနေ့တော့ မကုန်နိုင်သေးတဲ့ ပုဇွန်သားလေးတွေကို ခေါင်းချိုးပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ ဖိုးသတ်ဖတ်သတ် ချက်ပါတယ် ထမင်းစားလို့တော့ ဘာကောင်းသလဲ မမေးပါနဲ့တော့ အရမ်းကို မိန်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ ဖိုးသိုးဖတ်သတ် ကြော်ချက် ချက်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ - ခပ်သေးသေး တလုံး
ပုဇွန် ပဲငါးပိ အစပ်ကြော်
Posted by Tuumar at 6:55 am No comments:
ကျမနေတဲ့ Rockhampton မြို့လေးက ပူပူလိုက်တာဆိုတာ မပြောပါနဲ့တော့ ထိုင်နေရင်းနဲ့တောင် ချွေးတွေ တပြိုက်ပြိုက်ကျလာပြီး အလိုလိုနေရင်း လူက အရမ်းပင်ပန်းလာပါတယ် ဒီတော့ အစားစားချင်စိတ်ကိုလဲ ပျောက်စေခဲ့ပါတယ်။
ပုဇွန်ခေါင်းချိုး - 300g
ချဉ်ငံစပ် ကြက်သား ပဲကြာဇံသုပ်
ပဲကြာဇံအခြောက် - လက်တဆုတ်စာ သာသာ
ကြက်ရင်ပုံသား - အနေတော် တခု
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်
ကြက်သွန်မိတ် - အနေတော် တပင်
အရသာမှုန့် -လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း
ကြက်သားကို ဆားနှင့်နယ်ကာ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ပြုပ်ပေးပါ
ရေခမ်းပါက ပုံပါအတိုင်း မွှထားပေးပါ
ရေစိမ်ပြီးသော ပဲကြာဇံကို ရေစစ်ပြီး ရေနွေးဆူဆူ လောင်းထည့်ပေးပြီး ၃မိနစ်လောက်ထားကာ ရေအေးနှင့်ဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
မုံလာဥနီကို အခွံခွာကာ အလုံးလိုက် ရေဆေးပြီး ခပ်ရှည်ရှည် ခြစ်ထားပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဇလုံတခုထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်ကာ သံပုရာရည်ထည့်ပြီး ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးပါ
အားလုံး သမသွားပြီဆိုတာနဲ့ အရသာမြည်း၍ လိုသလိုပြင်ပေးကာ ပဲကြာဇံသုပ် ချဉ်ငံစပ်လေးကို စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
အာလူးကတ်တလိတ်ဆိုရင် အရသာ အမျိုးမျိုးထည့်၍တမျိုး သတ်သတ်လွတ်တသွယ် အသားများ ထည့်ပြီးသော်၎င်း မျိုးစုံအောင် ကြော်တတ်ကြပါတယ် မာမာကတော့ ဒီတခါ ကြက်ဥအကာထဲ နှစ်ပြီး မဆလာနံ့ သင်းသင်းလေးနဲ့ ကြော်ထားတာဖြစ်လို့ ကြော်နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
တန်ပူရာမှုန့် - ထမင်းစားဇွန်းမောက်မောက် ၃ဇွန်းမောက်မောက် (မည်သည့်အကြော်မှုန့်မဆို ထည့်နိူင်ပါတယ်)
အခွံခွာပြီးသား အာလူးကို စတီးဇလုံ တလုံးထဲထည့်ပြီး ဆား အရသာမှုန့် တန်ပူရာမှုန့် မဆလာ နနွင်းမှုန့်တို့ထည့်ပြီး အာလူးကို ကျေအောင်ချေကာ နယ်ပေးပါ
အာလူးများ စေးပိုင်လာပါက ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းစာယူပြီး လက်နှင့်ဆုတ်ပေးပါ
အားလုံးကို အဆုတ်လေးများ ဆုတ်ပေးပြီးပါက လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကြားထည့်ပြီး ၀ိုင်းသွားအောင် လုံးပေးကာ ခပ်ပြားပြားလေး ဖိပေးပါ
ကြက်ဥအကာကို ဇလုံတခုထဲမှာ ခက်ရင်းဖြင့် ပွလာအောင် ခလောက်ထားပေးပါ
မီးလျော့ပြီးမှ အာလူးလုံးများကို တခုခြင်းယူပြီး ကြက်ဥအကာထဲမှာ လူးပေးပြီးမှ ထည့်ပြီးကြော်ပေးပါ
တလုံးလုံး ရွှေဝါရောင်သန်းလာပါက ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးပါ
ချဉ်ငံစပ် ကြာဇံ ဖိုးသိုးဖတ်သတ်သုပ်